Apple Watch Series 6 specs, runyerekupe, nhau uye zuva rekuburitswa
Apple inotevera smartwatch haizoonekwe kusvika Nyamavhuvhu, padivi pe iPhone 12 mhando, asi izvo hazvina kumisa runyerekupe rwuve pachena pamusoro pazvo.
Hezvino zvese zvatanzwa kusvika parizvino nezveApple Watch Series 6, zvakasanganiswa nezvatiri uye tinotarisira kuona.
Chii chinonzi Apple Watch chinodaidzwa?
Pamwe Apple Watch Series 6
Kusiyana neiyo iPhone, Apple haina kukanganisa kutenderedza neiyo Watch mazita. Sezvo iyo yekutanga yakateverwa neApple Watch Series 1, kambani yakatevera nehuwandu hunoteedzana gore rega.
Naizvozvo zvakanyanya mukana isu tinotarisira kuti gore rino rinodaidzwa kuti Apple Watch Series 6, ichibudirira 2019's Apple Watch Series 5.
Iyo wachi itsva ichave iri kumhanyisa Apple WatchOS 7, yatichazowana zvimwe pamusoro pekambani chaiyo yekuvandudza musangano muna June.
Apple Watch Series 5 vs Series 3: Ndeupi mutsauko?
Apple Watch Series 6 yekuburitsa zuva
Kufanotaura 8 Gunyana 2019
Apple kazhinji inobata chiitiko chayo chekuparadzira iPhone munaSeptember wega wega gore uye chinotevera chinotevera cheWatch chinowanzoziviswa panguva imwe chete.
Chiitiko ichi chekutanga chinowanzoitika muvhiki yechipiri yaGunyana nemusi weChipiri. Tiri kuisa mari yedu musi wa 8 Gunyana 2020 pari zvino, kunyangwe isu tinotarisira kuti hapana chinosimbiswa zviri pamutemo kusvika Nyamavhuvhu 2020.
Apple iPhone 12, 12 Pro uye 12 Pro Max kuburitsa zuva, maitiro, nhau uye runyerekupe
Zvatinoda uye tinotarisira kuona pane inotevera Apple Watch
Tarisa pane kusimba - mamwe mafambiro epamberi
Kuvandudza hupenyu hwebheteri
The Nhepfenyuro dzeApple 4 akaita mamwe makuru ekuchinja shanduko maererano nekuratidzwa uye iyo Series 5 inotora dhizaini rimwechete. Maitiro akajairwa uye chimiro chinoramba chakafanana kurinda kwepakutanga, asi iyo Series 4 ne5 inopa yakawanda screen mune akafanana tsoka tsoka.
Isu tiri kutarisira kutarisira kwakakura dhizaini yeApple Watch Series 6 yakapihwa Series 5 inongopa zvidzoreso zvidiki zvinosanganisira iyo Inogara ichiratidzwa uye kambasi yakavakirwa. Iyo Apple Watch yakave neyayo fomu yekutanga kubva payakatangwa kuzounzwa saka isu tinoshamisika kuona shanduko iyi zvinoshamisa asi haumboziva.
Isu tinotarisira zvakare huwandu hwehutano uye hwekugwinya, pamwe nekutora zvakada Garmin ine zvimwe zvinomhanya mabasa senge cadence kuteedzera semuenzaniso. Garmin anoitawo basa rakakura rekugonesa vashandisi kugovera kwavo kumhanya kana kuita kwavo saka isu hatingashamisike kuona Apple ichitora tsamba kubva mubhuku iri. Imwe runyerekupe iyo inoramba ichipinda zvakare kubuda ndeyekutarisa huwandu hweropa rako, asi izvi zvaizoda mamwe manyowani matsva.
Tinoda kuona mabhatiri achigadziridzwa kuti afanane nemamwe smartwatches mumusika, fanika iyo Samsung Galaxy Watch uye isu tinodawo kuona kurara tichiteedzera pa Series 6, pamwe nekufamba-famba. Kana runyerekupe ruchitenda, kugona kurara kwakasungirirwa (sechikamu che watOS 7) uine chinangwa chekurara muhutano hwehutano.
Zvingave zvakare zvakanaka kuwona iyo Apple Watch ichivhura zvimwe. Panzvimbo pekungokwanisa kuvhura Mac yako, pamwe inogona kuita sehofisi kiyi kadhi rako zvakare, semuenzaniso.
Zvimwe zvinogoneka zvinogona kusanganisira zvinhu kunge smart tambo, wechitatu bato rutsigiro rwewindo zviso, kamera uye Face ID, kunyangwe isu tichifungidzira iwo ekupedzisira maviri ari kufungira kufunga pane kungofungidzira kuwedzera, kunyanya nekuda kwekushayikwa kwenzvimbo kune sensors.
Apple Watch Series 6 runyerekupe: Chii chakaitika?
Heano ese eiri runyerekupe uye nhau kusvika zvino, zvakatenderedza Apple Watch Series 6.
30 Kurume 2020: Ropa oxygen oxygen level uye yekurara tracking
Kuongorora oksijeni kweropa zvaizoda hunyowani hutsva, asi zvinokwanisika izvi zvinogona kunge zviri kuuya muTeki 6. Kurara uchiteedzera kunounza mune dambudziko diki kunyangwe nekuti vanhu vazhinji vanopomera yavo Apple Watch husiku.
Isu tinofunga kuti chimiro chaizofanirana nehupenyu hwebhatiri hwakawedzerwa hwewachi sezvo mikana yekuchaja yaizove mashoma.
9 Kurume 2020: Apple tarisa OS 7 inoratidzira kusvetuka
Leaked iOS 14 kodhi yakaratidza zvimwe zvimiro zveOSOS zvinomwe, izvo, zvinouya kuApple Watch 7. Pachave nechinangwa chekurara muApple Health app pane iyo iPhone uye yekurara kweApp.
Kuchavawo neyekutarisisa idzva inonzi Infograph Pro ine tachymeter ficha zvakare kuchavawo neChiso chekutarisa kumeso, futi. Vabereki vanokwanisa zvakare kubata vana 'Apple Watches zvakare.
Apple watchOS 7: Sunungura zuva, zvimiro, kuburitswa, uye nhau
6 Kukadzi 2020: Dhijitari Crown kuti uwane chimiro chitsva
Chimwe chezvinhu chakasiyanisa nezveApple Watch ndiyo Dhijitari Crown. Iye zvino chaigona kutora zvimwe zvitsva kuti zviite kubata kana kuti kurerusa. Zvirokwazvo Apple ingafunga kuti korona iwedzere kuterera kuburikidza nenzira idzi, kwete shoma. Zvekare, izvi zvakaonekwa nekuda kwekusunungurwa kwemvumo.
"Korona ingasanganisira chirevo-chinotungamira chakagadzirirwa kutungamira, kuchinhu chinonzwa mufananidzo, chifananidzo chechinhu chakabatana neyakafungidzira" inodaro kusefa. Korona inogona kugona kuona kufamba kwemunwe wako sezvaunotenderera kana kubata korona.
Apple Insider inopa zano izvi zvinogona kureva kuti Dhijitari Crown ane mashoma mumuviri kuwanda, saka, kugadzira nzvimbo mukati mekutarisa kune zvimwe zvinhu.
30 Ndira 2020: Dhijitari Crown yakaiswa kutsiviwa neanoratidzika kuverenga?
A patent yakaonekwa naPatently Apple inoratidza Apple Watch Digital Crown ichitsiviwa neyekutarisa zvigunwe zvigunwe kuverenga pane izvo zvozogona kuziva zviitwa, sekunge ungazotenderedza korona chaiyo.
Parizvino isu tinofunga zvisingaite kuti Apple ibvise iyo Dhijitari Crown nekuti ndiyo imwe yemisiyano yakasarudzika patepi yenguva. Asi izvi zvinogona kuitika mune inotevera vhezheni yeApple Watch pane kuti ive yegore rino, hongu.
11 Mbudzi 2019: Inogona Kubata ID kuita nzira yayo kuApple Watch?
Apple yakazunza patent iyo inoshandura iyo Apple Watch skrini kuti ive yeSeti ID sensor. Iyo patent inotaura kuti "kuratidzwa kunogona kupa mufananidzo kana vhidhiyo inobudiswa yechitarisiko chegumi. Iyo inoratidziro inogona kupawo nzvimbo yekuisa kune imwe kana yakawanda michina yekuisa yakadai seyisi yekubata inobata, mudziyo unonzwa-simba, mudziyo wekunzwa kupisa, uye / kana sensor yemunwe. "
Tichiri kuona mafoni akawanda neasina-kuratidza-mafoni maverengi izvozvi, kufamba uku kungada nhanho-yekukwira tekinoroji nekuda kwekuderera kwehukuru hwewindo.
7 Gumiguru 2019: Apple yekutsva yekurara app neyekurara tracking yevashandisi veApple Apple vanoona mukukanda
Mushandisi we Twitter, Daniel Marcinkowski yakawona iyo ichiri-kuti-iburitswe Kurara app yeApple Apple inotaurwa mune App Store Store. Rondedzero yakabuda yeApp yekutanga yakaiswa maAlarms app paApple Apple.
Marcinkowski akagovanisa skrini inoratidza isina kuvandudzwa yeiyo Alarms app yakanyorwa ne "Kurara" uye kurudziro yekuti "Gara Nguva yako Yekurara uye unomuka mukurara app". Hazvina kujeka kana chimiro ichi chingaonekwe pamberi peiyo Series 6, asi isu tinoshamisika kana isina kuuya kune ye2020 modhi.
5 Nyamavhuvhu 2019: Apple Watch inogona kushandisa mu-kuratidza zvigunwe zvekunzwa
Muongorori Ming-Chi Kuo akati Apple ichaunza iyo inochengetedza chigadzirwa chekupidigura chigunwe muye 2021 iPhone, asi zvakare akati tekinoroji iyi inogona kushandiswa muApple Watch zvakare.
Parizvino, Apple Watch haina biometric chengetedzo asi in-kuratidza chigunwe chinogonesa sensor yaibvumira iyo kupa zvimwe, pasina kuchinja dhizaini.
26 Nyamavhuvhu 2019: Apple yekuedza kurara yekutevera yeTarisa
Bloomberg yakashuma kuti Apple yaive kuyedza yekurara yekutevera tekinoroji yayo Apple Watch. Kunyangwe vamwe vaifunga kuti ichasvika pa Series 5, Bloomberg aigara achiti zvaitarisirwa kusvika kusvika 2020 pa Series 6.
16 Ndira 2019: Hutatu hombe hutano hunhu hunhu
Iyo Kambani Inokurumidza yakashuma iyo Apple yakabiridzira vanachiremba vazhinji uye mainjiniya kuti vashande pahutano hweApple Watch, iyo inonzi inosanganisira kweropa, glucose yeropa kana chirwere cheshuga nekurara ichiteedzera kana sainzi. Tapihwa izvi zvisingaonekwe paTeki yechishanu, pamwe vangangotarisana neiyo Series 5?
8 Chivabvu 2018: Patent yekutenderera Apple Watch yakatenderwa
Patent yecircular technology technology yakatenderwa, mushure mekutanga kumhan'arwa muna Ndira 2016. Iyo faira inotaurwa nezvayo kupfeka, zvichitungamira vamwe kufunga kuti inotenderera Apple Watch yaive ichiuya.